Right to Expression – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 10 July 2010 18 October 2010 Categories Discussion, Parenting, Reproduction
5 thoughts on “Right to Expression”
အရမ်းကြိုက်တယ်… နောက်မှ ကွန်မင့်န်ရှည်ရှည်ရေးဦးမယ်။ ကွန်ပျုတာပျက်နေလို့
“ရိုးရိုးကျင့်၊ မြင့်မြင့်ကြံ၊ မှန်တာလုပ်၊ ဟုတ်တာပြော၊ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်” ကြားဘူးတဲ့ စာသားလေးပါ။ အဲဗျ… မှန်တာပြောရင်လည်း ရွာပြင် ထုတ်ခံရတယ်တဲ့….သတိထားဦးမပါလေ…။
sir ka yaw sir’ parent ko lay respect shi ya’ lar?
10 May 2011 at 10:59 am
Facebook မှာ ဒါကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်တင်တော့ တက်လာတဲ့ comment တချို့နဲ့ ကျွန်တော့် အဖြေများကို ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Ye Myat Thu: မိဘ က မကောင်းတာ ကောင်းတာ သိ ပြီး တဲ့နောက် သားသမီးစရိုက်နဲ့ အနေအထားကိုပါသိမှ ယုံကြည်မှု့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းကဆောက်ထားနိုင်မှ သူတို့ရဲ့ role model တခုခုကို မိအောင်ဖမ်းနိုင်မှ ကိုယ် တည်ဆောက်ချင်တဲ့ ပုံကိုဆောက်နိုင်မယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ ဘုရားပင်လျင် တ…မျိုးတည်းသောတရားကို နေရာ အလိုက် ခံယူသူအလိုက် အနေအထားအမျိုးမျိုးမှာ ကျိုးစားခဲ့ရတာပါ။ သတ္တဝါတဦးက အခြားတစ်ဦးကို ပုံသွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းထက်အဆိုးဆီဦးတည်တတ်ပါတယ်။ ညွန်ပြ ပဲပြင် သိစေတယ် ဖြစ်စေလိုတယ် ထက် ပိုတင်လို့မလွယ်လောက်ပါဘူး လို့မြင်ပါတယ်။
Khun Myahlaing: ခဏခဏ ပြန်ပြန် တင်ပေးသင့်တဲ့ စာတပုဒ်ပါပဲ ဆရာရေ… တချို့ အမြင် တိုသူ တွေက ဒီလို စာမျိုးရေးရင် စာရေးသူက မိဘကို မရိုသေနိုင် လို့ ရေးတယ် ထင်တဲ့ လူက ရှိသေးတယ်။ ရိုသေစရာ အချက်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် မရိုသေနိုင်တဲ့ အချက် တချက်ကို ထောက်ပြတာနဲ့ လုံး…၀ မရိုသေဘူးဆိုတာနဲ့ တခြားစီ ဆိုတာကို၊ ချစ်ခင်လေးစားတာက သပ်သပ် ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက် ခံစားချက်ကို တင်ပြတာက သပ်သပ် ဆိုတာကို ခွဲမမြင်တဲ့ သူတွေက များနေသေးတယ် ဆရာ… အထက်အောက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပြင် ဘေးတိုက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး လို့ ပြောရမယ့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြား ထားသင့်တဲ့ စိတ်နေသဘောထား တွေအကြောင်း ရေးပေးပါဦးဆရာရေ…
Atta Kyaw: ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို တစ်ခါမှ ရိုသေတာ မသင်ပေးခဲ့ဘူး။ လေးစားတာကိုသာ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရိုသေတာက အောက်က အထက်ကိုပဲ ရှိရတဲ့အလေ့အထ။ အဲဒါကို သင်ရင် အရိုသေခံချင်လာတယ်၊ သည်အခါ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ထက် နိမ့်တဲ့သူကို နိုင်လိုမင်းထက် လုပ်ချင် လာတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေးစားတာကိုပဲ အဓိက ထားပြီး သင်ခဲ့ပါတယ်။
လေးစားတာကျတော့ အရွယ်သုံးပါး မရွေးသလို သက်ရှိ၊ သက်မဲ့၊ တိရစ္ဆာန်များ သာမက ဒြပ်မဲ့ (ဥပမာ – ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်) ပါ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကိုယ်က အလေးစားခံချင်ရင်လည်း သူများကို လေးစားမှဆိုတာကို သဘောပေါက်လာစေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်က ရိုသေတာကို ကျွန်တော်က တမင်ကလာ မသင်ဘူး။
ပူဇော်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်။ ဘုရားဂုဏ်၊ တရားဂုဏ်၊ သံဃာ့ဂုဏ်၊ ဆရာသမား (အားလုံးကို ခြုံထားသော၊ မိမိရဲ့ သင်ဆရာများသာမက မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာများပါ ပါဝင်တဲ့ ဆရာများရဲ့ ဂုဏ်)၊ မိဘဂုဏ်များကို ပူဇော်တာက သတ်သတ်ပါ။
ရိုသေ၊ လေးစား၊ ကိုးကွယ်၊ ဆည်းကပ်၊ ပူဇော် ဆိုတာတွေကို ရောနှောသုံးပြီး လိုရာဆွဲလိုက်ရင် အကုန် ရှုပ်ကုန်တတ်လို့ ကွဲအောင် ပြောတာပါ။
အလျားလိုက် ဆက်ဆံရေးကို ရေးထားတာတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ဘယ်ထဲမှာတွေလဲ တောင် မမှတ်မိဘူး။ အားတိုင်း ရေးနေတာပါပဲခင်ဗျာ။
Maung Maung Myint: ဆရာ့စာတွေကို လိုက်ရှာဖတ်နေတာ ဒီတပုဒ် ဘယ်နေရာက လွတ်သွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး.. နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော့် chrome က ကျော်ခွဖတ်နေရတော့ တော်ရုံ မရတတ်တာလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့.. ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ မှန်ကန်တဲ့ adjustment လုပ်နိုင်ဖို့က အေ…ရးကြီးပါတယ်.. ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့လေးတစ်ခု Share လုပ်ချင်ပါတယ်.. သားငယ် ၇တန်းလောက်မှာ လစဉ် report card တစ်ကြိမ် မရောက်လာခဲ့ဘူး.. အမေ့လက်မှတ် သူကိုယ်တိုင် ထိုး ပြီး ပြန်ပို့လိုက်တာ နောက်လရောက်တော့ ဒီအမှု ပေါ် ပေါက်လာရော.. မိဘရော သားသမီးပါ ပေါက်ကွဲလွယ်ရင် …. ကျွန်တော်က အေးအေးဆေးဆေး မေးပါတယ်.. သား ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို အမေ့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရသလဲ.. သူ အဲဒီလစစ်မှာ အဆင့် (၄၂) ရောက်နေလို့ .. ပါပါးကို ပြောရင် မိုးမီးလောင်မှာမိုလို့ ပြောပါတယ်. အဆင့် (၄၂)ဘာကြောင့်ရသလဲ စုံစမ်းတော့ သူက ကျောင်းမှာ ဘာ tution မှ မယူပါ..အတန်းပိုင်အသစ်က ဒီကလေးနဲ့ မိဘတွေက ဘာကျူရှင်မှမယူ.. ကျွန်တော်တို့လည်းမသင်.. သားဘာသာ ကိုယ့်အသိနဲ စာဖတ်ရတဲ့ စံနစ်ဆိုတာ မသိရှာတော့ သူ့ဆီ ကျူရှင်မယူ တဲ့အတွက စိတ်တိုင်းကျ အမှတ်လျှော့တယ်.. အမှန်အတိုင်းဖြစ်တာတောင် ရအောင်လျှော့ထားတယ်.. ဒါကြောင့် (၄၂) ဖြစ်နေတာလို့ ပြောပါတယ်.. သူ့စကားကို သေသေချာချာ နားထောင်ပေးရပါတယ်.. သူ့ဆရာမ ကို မကျေနပ်.. အဆင့်ကျော်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ(စာမေးပွဲခန်းမှာ ခိုးချတတ်တဲ့)ရဲ မခိုးမခန့် ရိတာကို မခံနိုင်..အဖေနဲ့ ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖို..
ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ stress နဲ့ conflict တွေကို.. ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်…
၁။. အဖေက အတန်းစဉ်တွေမှာ ၁ မှာရပ်ခဲ့ တာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ.ဒါက သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုသက်သက်ပါ.. တတ် ထားတဲ့စာကို သုံးနိုင်မှာမှ အဖိုးတန်တာ.. ၁ ရခြင်းမရခြင်းက အဖေ့ လိုအပ်ချပ်မဟုတ်ပါဘူး.ဒီအတွက်သားစိတ်ပူစရာ မလိုကြောင်း..
၂။ Report card ကို အဖေအမေမသိအောင်လက်မှတ်လိမ်ထိုးတာ လုံးဝမလုပ်သင့်ကြောင်း.. ဘဝမှာ သား အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ရှုံးနိမ့် သည်ဖြစ်စေ အဖေနဲ့ အမေဆိုတဲံ လူ၂ယောက်က သားကို ထွေးပို့က်ထားဖို့ အမြဲရင်ဖွင့်ထားသူတွေ.. ငါတို့ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြမယ့်လူတွေ.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အခက်အခဲကို ပြော ပြ..ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ရှေ့ ခရီးဆက်ရမယ်…
၃။ ဆရာမက အမှားလုပ်နေတာမို့ ဒီအချက်ကိုလည်းနားလည်အောင် ပြောရတယ်.. သား ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း သိအောင်ပြ ပါလို့ ကြိုးစားခိုင်းတယ်..
၄။ အဲဒီနှစ် မြို့နယ်ဘက်စုံပြိုင်တော့ ပုဇွန်တောင် အထက(၄) က position 1st ကို ထုတ်မပြိုင်ဘဲ position (42) ကို ထုတ်ပြိုင်ပါတယ်..
သူ့မခံချင်စိတ်ကို ဖွပေးထားတော့ ဆုအားလုံး သိမ်းကြုံးယူလာနိုင်ခဲ့တယ်..
သူမျောလင့်ထားတဲ့ အဖေ့ဆီက အပြင်းထန်ဆုံးပြစ်ဒါဏ်အစား အားပေးမှုနဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် guide line ကို နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာ နဲ့ ရောမွန်းလိုက်တော့..
ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်..
သူလည်း ဘယ်ဟာ သူ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်.. ဘယ်ဟာတော့ အဖ့ပိုင်ခွင့် ဆိုတဲ့ စည်းကိုလည်း နားလည်သွားမယ် ထင်ပါတယ်.
နောက်တစ်ခါ ၁၀တန်းစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ည စာမကျက်နိုင်ဘဲ Winbeldon Federrer ပွဲကို ကြည့်ချင်နေတယ်..
မကြည့်ရရင် စိတ်မကြည် စာမဖတ်မှာအတူတူ.. သား နာရီဝက်လောက်ကြည့်ရရင် ကျေနပ်မှာလား. ကျေနပ်ပါ..သားအလို ကို လိုက်လျှောမယ်.. ဒါပေမယ့် အဖေ့အတွက် နာရီဝက် စာပိုဖတ်ဖို့ လိုရင် ဖတ်ပေးရမယ်.. သဘောတူရင် ကြည့်..
ကျွန်တော့ Negotiation အောင်မြင်ပါတယ်.. win.. win solution ရခဲ့ပါတယ်..
သေချာပါတယ်.. သူ့ရင်မှာ ပွင့်လင်းမှုနဲ့ မိဘမေတ္တာရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေ ကိုယ်ပိုင် confident ခံစားရမယ်ဆိုတာ..
(အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ဥပမာလေး တင်ပြ share လုပ်တာပါ.)
ဆရာကျော်ရေ.. တစ်လက်စတည်း အလျှားလိုက် ဒေါင်လိုက် ဆက်ဆံရေး ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးတွေ. တစ်ချို့လည်း ကျွန်တော်တို့ မသိမတတ်လို့ လမ်းညွှန်ပါဦး..
Atta Kyaw: မသုံးလုံးဆရာ Maung Maung Myint ခင်ဗျား။ အလျားလိုက်/ ထောင်လိုက် ဆက်ဆံရေးက တကယ်တော့ ရိုသေမှုကို အခြေခံတဲ့ အထက်-အောက် ဆက်ဆံရေးကို ထောင်လိုက် ဆက်ဆံရေးလို့ ဆိုလိုတာပါ ဆရာ။ အလျားလိုက်က လေးစားမှုကို အခြေခံတဲ့ လူလူချင်း တန်းတူ ဆက်ဆံရေးပါပဲ ဆရာ။
ကိုယ်က အသက် ၆၀၊ ကလေးက ၁၀ နှစ်။ သူစိမ်း ကလေးတစ်ယောက်ကို “ဟဲ့ကောင်လေး… နင့်အဖေ ရှိလား”ဆိုတာမျိုးဟာ ထောင်လိုက်သဘော ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲလို မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့နာမည် သိရင် မောင်ဘယ်သူပေါ့။ မသိရင်လည်း သားတန် သား၊ သမီးတန်သမီး သုံးစွဲပြီး သူ့ကို လေးလေးစားစား ပြောတာမျိုးပေါ့ ဆရာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်က ဖုန်းဖြေသူက “အခုပြောနေတာ ဘယ်သူပါလဲရှင်”လို့ မေးတဲ့အခါ ကိုယ်က ခပ်တည်တည်နဲ့ တစ်ဖက်သားကို ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းလည်း မသိဘဲ “ကျုပ် ဦးဘယ်သူပါ”ဆိုတာမျိုးဟာ တစ်ဖက်သားကို မလေးစားတဲ့၊ အလျားလိုက် ဆက်ဆံရေးကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ သူရဲ့ ပြောပေါက်ပါ။
တစ်ဖက်က ဖုန်းဖြေသူဟာ ကလေးလေးပင် ဖြစ်ဦးတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အိမ်က ကလေး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် “အောင်သိန်းကျော်လို့ ပြောလိုက်ပါ သမီး”လို့ ကျွန်တော် အမြဲပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလေး/အိမ်ဖော်က မသိသား ဆိုးရွားစွာနဲ့ သူ့မိဘကို “အောင်သိန်းကျော်တဲ့”လို့ အော်ပြောသံကို ကျွန်တော် အတိုင်းသား ကြားရတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ။ သို့သော် နောက်ပိုင်းကျတော့ မကြားရတော့ဘူး။ ကာယကံရှင်များအနေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကလေး/အိမ်ဖော်ကို ပြောပြခွင့် ရသွားတယ်လေ။ တကယ်လို့သာ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ဦးတပ်ပြောခဲ့ရင် ဟိုက သက်ဆိုင်သူကို ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော် ပြောသလို ပြောလိုက်မှာမို့ ကျွန်တော့်နားထဲမှာတော့ အ၀င်ချောချင် ချောနေမှာပေမယ့် ကာယကံရှင်များ အနေနဲ့ကျတော့ သူတို့အိမ်သားရဲ့ မသိသားဆိုးရွားမှုကို သိခွင့် မရလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ ဆရာ။
အလွယ်ပြောရရင်တော့ နိုင်လိုမင်းထက်သဘော သက်ရောက်နေတာ၊ အကျောကြီး၊ အတင်စီးကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ခယ၀ပ်တွားပြီး ဆက်ဆံရတာဟာ ထောင်လိုက်ဆက်ဆံရေးသဘော ဖြစ်ပြီး “လူလူချင်း” အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံတာဟာ အလျားလိုက် ဆက်ဆံရေးပါ ဆရာ။ ကျွန်တော့် သားသမီးတွေကို “ဆောရီး… အဖေ မှားသွားတယ်”လို့ ပြောဖို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ ၀န်မလေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါ အလျားလိုက် ဆက်ဆံရေးမို့ ပြောလို့ ထွက်တာပါ။ ထောင်လိုက်ဆိုရင် ငါက အဖေပဲ၊ ဘာပြုလို့ သားသမီးကို မှားကြောင်း ၀န်ခံရမှာတုံးလို့ တွေးမှာပါ။ အလျားလိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း လူ၊ သူတို့လည်း လူ၊ မှားမှာပဲ။ မှားတာသည် လူ့ဖြစ်စဉ်၊ သည်တော့ ၀န်ခံခြင်းနဲ့ ကောင်းတဲ့ အကျင့်ကို နမူနာပြပေးမယ် (သွန်သင်တာ မဟုတ်ဘူးနော်) ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ် ဆရာ။
ဒါဆို ဆရာ့အတွက် အတွေးစ ရသွားမယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Aung Myo Kyaw: ကြိုက်တယ် ဆရာရေ .. ဒီသဘောတရားတွေကို ကျနော်လဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပါတယ် … ကျနော်တို့ မြန်မာတွေအနေနဲ့က မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ကျေးဇူးတရားက သပ်သပ် ဆက်ဆံရေးက သပ်သပ် ဆိုတာကို ခွဲခြားသိကြဖို့ လိုပါတယ်။ မိဘရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သားသမီးထက် အလိုလို မြင့်မြတ်သွားပြီး ဘုရားနဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ အနေအထားရောက်သွားပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးအခ်ါအယူအဆကြီးကိုတော့ ပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ ငါတကောကောပြီး ငါပြောသမျှ မှန်၏ သားသမီးဆိုသည်မှာ ငါပြောသမျှ မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ပြီး စောဒက တက်စရာမလိုသော သူငယ်များဟု ယူဆနေမည် ဆိုလျင်တော့ မိဘ ဟူသည် ဘုရားနှင့်တဂိုဏ်းတည်း ဖြစ်မည်မဟုတ်ပဲ အာဏာရှင်နှင့်သာ တဂိုဏ်းထဲ ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
25 September 2011 at 9:18 pm
LeaveaReply to ကိုရင်ကောင်းမြတ် Cancel reply
Previous Previous post: For Parents and Teachers to Think Twice